Iimpawu ezine ezintsha kwi-watchOS 8 eza kuza iluncedo | Ndisuka mac
UToni Cortes | 08/06/2021 12:00 | Apple Watch
Izolo emva kwemini kwintetho yeWWDC 2021, besinokubona iindaba eziza kubandakanya isoftware entsha esiza kuba nakho ukuyivuselela kwizixhobo zethu zeApple kulo nyaka. Ezimbalwa zezi zinto zintsha ziya kuya kwiApple Watch yethu, ibandakanyiwe i-watchOS 8.
Kwaye kuzo zonke, zine eziya kuthi ekugqibeleni zibe zezona ziluncedo kunye nezo sizisebenzisa rhoqo. Masijongane nayo: Uninzi lwethu, kubaluleke kakhulu ngakumbi ukuba sikwazi ukuthumela Isilwanyana esiphilayo kwi-Apple Watch yethu, esinokuthi siyivule ngayo. Ngaphezulu kwayo nayiphi na into, kuba ukuvulwa kwemoto kubandakanya ukuthenga entsha ehambelana nenkqubo. Ke masinamathele kwii-GIF zoopopayi ...
Kwintetho ephambili yezolo bekukho icandelo lokuhambisa iindaba esiza kuzibona kwi-watchOS 8. Mhlawumbi ye-Apple, eyona ibalulekileyo sisicelo Camngca ukukunceda ujolise kwaye uphumle, usetyenziso Ikhaya Uyilelwe kwakhona ukulawula ikhaya lakho ngcono kwisandla sakho, uhlaziyo lwesicelo yiprojektinjl. Nangona kunjalo, kukho eminye imisebenzi "emincinci" kwinkampani ngokuqinisekileyo eya kuba luncedo kuthi.
1 Iifayile zoopopayi
2 Amaxesha ahlukeneyo
3 Fumana izinto kunye nezixhobo
4 Ukusebenza okuSebenzayo
Los Iifayile zoopopayi ziqhelekile. Bathi umfanekiso ufanele iwaka lamagama. Kwaye ukuba lo mfanekiso ungasentla uyaphiliswa, baba ngamawaka alishumi. Nokuba ziingxoxo zobuqu okanye zomsebenzi (ukuba umphathi wakho uyakuvumela oko), ii-GIF zoopopayi ziye zaba sisonka sethu semihla ngemihla.
Ke ngeWatchOS 8 singathumela ii-GIF ngokuthe ngqo kwisandla sakho ngokusebenzisa Imiyalezo njengokuba ungayenza kwi-iPhone. Oku kuthetha ukuba unokukhangela i-GIF ehamba phambili onokucinga ngayo kwaye uyithumele kumyalezo ovela kwi-Apple Watch yakho.
Umsebenzi endiqinisekileyo ukuba ndiza kuwusebenzisa, ngakumbi xa ndikunye neApple yam yokubukela i-LTE kwaye andinayo i-iPhone esesandleni.
Ukongeza kwii-GIFs, unokusebenzisa ii-Doodles, iDictation, kunye nee-emojis, zonke kumyalezo ofanayo kwiApple Watch. Ke unokuchwetheza ngokukhawuleza, uthethe okanye usebenzise i-emojis njengoko ufuna ukubhala umyalezo wakho ngaphandle kokushiya ifayile ye- isikrini esinye.
Kuvakala ngathi yinkomo yenkomo, kodwa ayisiyiyo. Ngohlaziyo olutsha siya kuba nakho ukufumana ixesha elininzi ngaxeshanye, kwaye ugcine ukubala ukubala kwezinto ezininzi ngexesha elinye. Iluncedo kakhulu ukuba upheka izitya ezininzi ngexesha elinye, kwaye ufuna ukulawula ixesha lento nganye, umzekelo. Ndiza kuyisebenzisa, ngaphandle kwamathandabuzo.
Fumana izinto kunye nezixhobo
Kude kube ngoku, isicelo soKhangelo kwiApple Watch sasinomda ekufumaneni unxibelelwano kunye neemvume zendawo. Nge-watchOS 8, unokufumana kwakhona izinto kunye nezixhobo.
Njengakwi-iPhone, ngoku unokukhangela izinto (ezi ziilebheli obhalise ngazo i-AirTag yakho, umzekelo "Izitshixo zemoto"). Kwaye unokukhangela zixhobo ezikunye nawe Apple ID. Ndiza kuyisebenzisa nayo, ngakumbi xa ndingaphathanga i-iPhone.
Ukunceda ukucofa iwatchOS 8 kuya kunceda abantu abaneengalo nezandla umahluko kuba ivumela ukusetyenziswa kwengalo enye kuphela kwiApple Watch. Oku kuyakuvumela iApple Watch ukuba izive ngathi izandla zomzimba zilula endaweni yokunxibelelana nescreen seApple. Sebenzisa i izinzwa zokuhamba Eyakhelwe ngaphakathi, ungaphendula iifowuni, ulawule isikhombisi esikrinini, kwaye ubonise imenyu yesenzo enokufikelela kwiZiko leSaziso, iZiko loLawulo, kunye nokunye kwi-Apple Watch yakho.
Kwimeko yam kunokuba luncedo kakhulu. Kwaye ayisiyiyo yokuba ndiphoswa yingalo. Kungenxa yokuba ndihlala ndiphethe ibhegi yam yomsebenzi ngesandla sam sasekunene, kunye neApple Watch yam ngasekhohlo kwam. Xa bendinomboniso wokuqala weApple ngaphandle kwescreen esithi "Soloko uhleli", andiyichukumisanga iwotshi ngempumlo yam ukuze ndibone isikrini ...
Njengoko benditshilo kwintshayelelo, ndiqinisekile ukuba siza kuzisebenzisa (ubuncinci mna) ezi izinto ezintsha Ngokukhawuleza nje ukuba zifumaneke kwiApple Watch yethu, kunokuba ezinye zibhombu, njengokukwazi ukuvula imoto okanye umnyango wendlu yam ngewotshi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iimveliso ze-Apple » Apple Watch » Iimpawu ezine ezintsha kwi-watchOS 8 eya kuba luncedo kuthi
Iimodeli ze-Apple Watch ezihambelana ne-watchOS 8